Ukuphupha kwipulpiti Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ipulpiti ubukhulu becala yindawo ephezulu ezicaweni, kodwa nakwiimoski nakwizindlu zesikhungu. Kuqala apha ukuba abefundisi bashumayele ilizwi likaThixo okanye banike iintshumayelo.
Iipulpiti azifumaneki kuphela kwindawo yonqulo. Eli gama lihlala lisetyenziselwa ukuchaza indawo yenqwelomoya okanye inqwelomoya. Nokuba isihlalo sokuzingela esiphakamileyo singabizwa ngokuba "yipulpiti yokuzingela."
Kodwa kwenzeka ntoni xa udibana nepulpiti ephupheni? Nguwuphi umyalezo onokufihlwa ngasemva kwephupha elinje? Ukutolika uphawu lwephupha, nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela ipulpiti ngokwayo ebalulekileyo. Ukuba intetho okanye intshumayelo inikwe ephupheni, amagama esithethi nawo kufuneka athathelwe ingqalelo ngakumbi.
1 Uphawu lwephupha «ipulpiti» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ipulpiti» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ipulpiti» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ipulpiti» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "ipulpiti" linokubhekisa kwi mpe mbelelo Chaza into eyenziwa ngumntu ophuphayo okanye angathanda ukuyenza kwabanye.
Ngubani othatha inqanaba lesithethi ephupheni angaya esidlangalaleni uzukisiwe okanye iinzame zakho zeshishini azizukuqhuba ngokwanelisayo. Ukuba uzibona umi phambi komfundisi kwaye unika intetho, uhlala unqwenela ukuba unganempembelelo kwabanye. el mundo ukuvuka. Ngokufanayo, ukulahleka kweshishini kunokwenzeka, ukuba umntu ophuphayo akayikhathaleli ngokwaneleyo ngemali yakhe kwikamva elikufutshane.
Ukuba ipulpiti ibonwa ephupheni ngengqondo yesihlalo esiphakamileyo okanye inkxaso ephezulu, oku kunokwenziwa ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. ikratshi Ukongeza kwisilumkiso malunga Ubulungisa Kwilizwe lokwenyani. Ukulinda kwisihlalo somzingeli ngelixa uzingela ngokubanzi kuzisa impumelelo yobungcali okanye yabucala ngayo.
Ukuba umntu ophuphayo ubona i-cockpit okanye i-cockpit yenqwelomoya ngelixa elele, uhlala efuna ukwenza imisebenzi yakhe yemihla ngemihla. ukubaleka kwazi uku. Nangona kunjalo, oku kufuna utshintsho oluthile kwindlela yakho yokuphila kwilizwe lokwenza iwotshi.
Uphawu lwephupha «ipulpiti» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kutolika iphupha apho intshumayelo iviwe ipulpiti njengomyalezo ovela ezingqondweni. Umphuphi kufuneka Ukucamngca kugcina kwaye ulawule amandla akho angaphakathi.
Ukuba umntu ophuphayo uzibona engumbingeleli okanye umfundisi ecaweni eshumayela epulpitini, lo ingangumnqweno wakhe. Impembelelo ukufuzisela abanye abantu. Nangona kunjalo, lo mntu kuthethwa ngaye usenokufuna ukuboniswa ukuba unenkani kwaye akanangqiqo kwihlabathi elivukayo. Umntu ngamanye amaxesha uthanda ukuphatha abanye "ukusuka phezulu."
Nabani na othetha ephupheni lakhe kwimakrofoni kwisithethi kwiholo kufuneka avakale kakhulu. Isidingo sokwazisa bazibonakalisa ebomini bokuvuka. Umxholo wentetho kufuneka uphinde uvavanywe ngokusondeleyo, kuba ukuqonda ngakumbi ukutolikwa kunokufunyanwa kuyo.
Ukuba uva umntu enika intetho eMardi Gras okanye eCarnival eBütt ngelixa ulele, oku kunokuba yiminqweno yakho. ezahlukeneyo ukuzekelisa. Umntu ekuthethwa ngaye angathanda ukwahlukana nesiqhelo kunye nokususa isithukuthezi semisebenzi yakhe.
Uphawu lwephupha «ipulpiti» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba eligqithisileyo lohlalutyo lwamaphupha, umfanekiso "wepulpiti" wephupha uqondwa ikakhulu njengephupha lokuba ungomnye kwimicimbi yokomoya. ingqondo ephezulu unqwenela uku.
Iphupha malunga neBauer
Iphupha NgePaki yeBhentshi